Hojii manaa hedduutu barattootaaf kennamaa? - BBC News Afaan Oromoo
Hojii manaa hedduutu barattootaaf kennamaa?
Hojiin manaa barattootaaf kennamu hamamtuu baay'eedha jedhama?
Barattoota, barsiisaafi maatii biratti kun gaafii guddaadha.
Sakkata'i dhugaa ykn 'Reality Check' gara mana barumsaa haawaasa Nootinghaam shaayeer deemuun gartuu babaastoota bana barumsaa umurii waggaa 7 - 9 ta'an waliin hojjechuun gaafii kanaaf deebi'i argachuuf yaaleera.
Jalqabarratti, deebii bu'uuraa tokkoo tokko argachuuf jecha waliisaanii gaafatan.
Hojiin manaa baratoota barumsa saanitiif ni gargaaraa?
''Eeyyee,'' jetti Laawreen, ''sababni isaas hojii manaaf waan siif kenamu yoo kan beektu ta'e, kutaa barumsaa isa booda baratuus beeku dandeessa.
Haa ta'u malee hojiinsaa ni heddumaataa?
''Eeyyee yeroo tokkoo tokko,'' jedha Riyaan. ''Gosa barnoota akka aartii keessatti, hojiin manaa nuuf kennamu gara fuulduratti kan hangas nu fayyadu natti hinfakkaatu.''
Garuu ammoo oggeeyyiin maal jedhuu? Yaada haalaan walmakaa ta'etu jira.
Akka gabaasni guddichi Qajeelcha barnootaa bara 2014 keessa maxanfamee kaa'eetti, baratoonni waggaa 9 keessa jiran fi giddugaleessatti sa'a 2-3'tti hojii manaa hojjechuurratti kan dabarsan harka kudhaniin warra hojiin manaa gonkumaa hinkennamneef caala gosa barumsaa shaniin qabxii olaanaa akka fidu danda'an tilmamameera.
Haa ta'u malee, daangaan isaa hagam? Hojiin manaa hedduumachuun kan nama dhiphisuufi bu'aa faallaa ta'e fiduu yoomii?
Kun barattoonni mana barumsaa Suutoon jiran guddisanii kan yaadan:
''Yoo hojii mana baay'een kan si kennameefi daftee hojjettee fixuuf utuu ariifatuu hojii biroon kan si eegatu yoo ta'e, dhugumatti kan nama dhiphisu ta'a,'' jehda Poorisheen. ''Baay'ee rakkisaa ta'u danda'a garu ammoo kan nama fayyaduudha.''
''Hojii argachuuf beekumsaa herreega qabaachuu akka nurra jiruufi Afaan Ingliziis beekuus akka qabnu yeroo heddu nutti himama,''jetti Samiiraan. ''Yeroo tokkoo tokko baay'ee salphaadha, garuu yeroo tokko tokko wayita hojiin manaa haaraa ta'u hojjechuuf nu rakkisa.''
Manneen barumsaa Inglaand hanga 2012'tti, hojii manaa hamam kennamuun akka qaburratti gorsi kennamaafi ture. Amma garuu manneen barnootaa haala baratootasaanii waliin deemuun sirna ofii karoofachuu danda'an qabu.
Akka waliin madaallii addunyaarratti godhame mirkaneesuutti, milkaa'ina barnootaa fiduuf malli tokkichi hundumaaf tolu hinargamne.
Akka xiinxxalli Sagantaa Qorannoo Barattoota Idl- Aduunyaatti, baratoonni biyya Chaayinaa hojii mana hedduun kenamuufiin tokkooffaa ta'anis, barnootaan qabxii olaanaa warra argatan keessas tokko.
Xaaliyaaniin, warra hojii manaa hedduu kennan keessa tokko taatuyyu, qabxii - argatan garuu baay'ina yeroo isaan hojii irratti dabarsaniin kan wal gitu miti.
Finlaandi wayita UK waliin madaalamtu hojii manaafi qormaata irratti xiyyeeffanaan isheen kennitu baay'ee xiqqoo ta'uyyu, addunyaarratti sirna barnoota milka'aa qabaachuun sadarkaa olaanaarra jirti.
Sirna barnootni biyyooleessa ittiin bu'ureeffamanii alatti haalawwan biroonis akka ilaalcha keessa galu qaban jiru.
Barataan hundiyyu garaa garummaa qaba, akkasumas karaa addaa addaan hojjeta.
Manneen barumsaas sadarkaa adda adda qabu. Walumaagalatti, haalli tasgabbi jireenyaa mana keessa jiruu raawwii irrattis ta'e dandeettii baraataan tokko hojiisaa yeroon xumuru danda'u irrattis shoora guddaa qaba.
Xumura qorannoo mana Barumsaa Suutoon:
Hojiin manaa barbaachisaadha. Garaa garummaa guddaas ni fida. Haa ta'u malee, qabxiin inni guddaan hojii manaa hedduu baay'een kennuun qabxii foyya'aa akka fidan gochu hindanda'u.
Jechoota biraan, madaalliin jireenyaa - hojiin manaa barattootatti baayachuun maatiiwwanii fi barattootas haalaan kan yaaddeessu akka ta'e barameera.
Dhaabbilee barnoota olaanoo tasgabbii dhaban
26 Muddee 2017
Hidhi Haaromsaa waggaa afran dhufanittii 'ni xumurama'
Namichi tuttuqqaa saalaa xiyyaara US keessatti raawwate hidhame
Loltoonni Itophiyaa hoggana duraanii Al-shabaab to'atan
Lammileen 2,250 Saawud Arabiyaarra gara biyyaa deebiifaman
Somaaliyaan hayyama qurxummii qabuu Chaayinaaf kennite